Kheladi - के भन्छन् प्रत्यक्ष रंगशाला घटना देख्नेहरू ?
विम्बल्डनः विश्व नम्बर दुई जाबेर र सुरेन्को दोस्रो चरणमा
विम्बल्डन: रिस्क दोस्रो चरणमा
एनआरटी आज मलेसिया जाँदै
क्यानडा जाने क्रिकेट टिमलाई क्यानको बिदाई
पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठलाई एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङको बधाई
प्रतियोगिता र ट्रेनिङलाई निरन्तरता दिनुपर्छ– प्रशिक्षक टमाटा
बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुला महिला भलिबल प्रतियोगिता भोलिदेखि
चेकले चेल्सी छाड्ने
पाँडेको नियुक्तिले विधान मिचेको छैन: एन्फा
असार १३, २०७९ १८:०६
असार १३, २०७९ १६:२६
असार १३, २०७९ १४:२७
असार १३, २०७९ १३:४०
असार १३, २०७९ १७:५३
असार १३, २०७९ १७:३३
असार १३, २०७९ १४:४८
खेल्नै नपाई बाहिरिँदा पीडा भयोः कप्तान क्षेत्री
असार १३, २०७९ १३:१२
असार १३, २०७९ १४:४५
काठमाडौं जिल्ला भलिबल संघको अध्यक्षमा कट्टेल
असार १२, २०७९ २२:०८
न्यू डायमन्डलाई महिला भलिबल उपाधि
असार १२, २०७९ १७:२६
लुम्बिनी भलिबल संघको अध्यक्षमा बैरागी
असार १२, २०७९ १४:२३
पुस्तक अंशः अबको दशक साहसिक खेलकुदको
जेठ ३१, २०७९ १७:०७
सगरमाथा आरोही ओलम्पियन सब्रिना राखेपमा
जेठ २०, २०७९ १८:०६
तामाङलाई एभरेष्ट म्याराथनको उपाधि
जेठ १५, २०७९ १८:१६
श्रेष्ठले गरे सगरमाथा आरोहण
जेठ ३, २०७९ १९:४१
असार १३, २०७९ १९:०६
असार १३, २०७९ १८:४४
विम्बल्डन आजबाट, जोकोभिच र सुन भिड्दै
असार १३, २०७९ ११:३७
के भन्छन् प्रत्यक्ष रंगशाला घटना देख्नेहरू ?
फागुन २९, २०७८ ००:००
दशरथ रंगशाला ।
त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्डको फाइनल चलिरहेको थियो । दशरथ रंगशालाको मैदानमा उपाधिका लागि तत्कालीन नेपाली फुटबलको महारथी जनकपुर चुरोट कारखाना र बंगलादेशको मुक्तिजोद्धा प्रतिस्पर्धारत थिए ।
नेपाली फुटबलका सबैजसो स्टार खेलाडीको साथ रहेको जनकपुर उपाधिको बलियो दाबेदार थियो । त्यसमाथि दशरथ रंगशालाको घरेलु मैदानमा दसौं हजार घरेलु समर्थकको साथले जनकपुरको उत्साह अझै थपिएको थियो ।
समर्थकहरू जनकपुरले उपाधि जितेर २०४४ साल फागुन २९ गतेको दिनलाई नेपाली फुटबलमा यादगार बनाउन चाहन्थे । यस्तो महत्वको दिन कि जसलाई वर्षौसम्म स्मरण गरिइरहोस् ।
दक्षिण एसियामा नेपाली फुटबलको प्रतिष्ठा राम्रो थियो । त्यसमाथि जनकपुरको टिम घरेलु दर्शकका लागि ‘हाम्रो’ पनि थियो । किनकि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अधिकांश खेलाडी जनकपुरको जर्सीमा मैदान उत्रिएका थिए । त्यसैले त सुरुमै गोल खाए पनि दसौं हजार नेपाली दर्शकले गोल फर्काउने र अन्तमा खेल जित्ने आसमा रंगशाला छोड्न सकिरहेका थिएनन् ।
घटनाक्रम फरक थियो । तर, भयो त्यस्तै । त्यो कालो दिनका रूपमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने भयो । त्यही निर्दयी दिनले त हो, नेपाली फुटबलका सय हाराहारीका समर्थकको इहलिला समाप्त पारेको ।
फुटबल विश्लेषक सन्जिव मिश्र त्यो दिनलाई नेपाली खेलकुदको मात्र नभई देशकै लागि अत्यन्तै कालो दिनमध्ये एक मान्छन् । भन्छन्, ‘खेलकुद त्यसमा पनि फुटबल भनेको मानिसलाई खुसी दिने माध्यम हो । यसले पूरा समाज, देश र विश्वलाई नै खुसीको सञ्चार गराउनुपर्छ । तर त्यो दिन झन्डै सय नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । सयौं घाइते भए । अनि यो सबको दोष फुटबलले लिनुपर्यो ।’
उपाधिका लागि दुई टोलीबीच मैदानमा घमासान चलिरहँदा अचानक हुरीबतास चल्यो । हुरीबतासबाट जोगिन दर्शकमा भागदौड हुँदा साँघुरो गेटमा च्यापिएर नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरू सम्झन्छन् ।
फुटबल हेर्न दशरथ रंगशाला आएकाहरू हुरीबतासबाट जोगिन भागदौड गर्ने क्रममा ठूलो दुर्घटना भएको थियो । घटनास्थलमै नेपाली फुटबलका ७३ समर्थक दुःखद ढंगमा धर्तीबाट बिदा भएका थिए भने दुई दर्जनभन्दा बढीले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाए । घाइतेहरूको यकिन तथ्यांक त कसैसँग पनि छैन ।
दर्शकलाई ओहोरदोहोर गर्नका लागि रंगशालाको प्यारापिटमा आठ वटा ढोका बनाइएका थिए । तर घटना हुँदा एकमात्र ढोका खुला थियो । बेजोडले आएको हावाहुरी र असिनापानीबाट जोगिने उद्देश्यमा सबै दर्शकलाई बाहिर निस्कने हतारो थियो । त्यही हतारोमा हजारौं दर्शक एउटै ढोकातिर झुम्मिँदा च्यापिएर धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
अहिलेजस्तो मौसम पूर्वानुमान गर्ने विश्वासिलो प्रविधि थिएन । आयोजकमा पनि ठूलो भीड व्यवस्थापनको अनुभव कमी थियो । ठूलो भीड जम्मा पारेपछि सबैका लागि सहज बर्हिगमनको बाटो बनाउनुपर्छ, अन्यथा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने चेत पनि थिएन ।
फुटबलको निकै ठूलो क्रेज रहेको काठमाडौंमा भएको फाइनल हेर्न २० हजार हाराहारीमा दर्शक रंगशाला पुगेका थिए । टिकट नकाटेकाहरू रंगशाला छिर्लान् भनेर प्रशासनले एउटाबाहेक सबै ढोका बन्द गर्ने गर्थ्यो । सधैं बन्द गरिने भएकाले सिक्रीले बाँधिएका अरू ढोकाका लिकमा खिया लागिसकेको थियो । त्यही कारण हुल हुन थालेपछि खोल्न खोज्दा पनि अरू ढोका खुलेनन् ।
त्यही कारण हो, सामान्य प्राकृतिक नियमितता दशरथ रंगशालामा ३४ वर्षअघि ठूलो ताण्डवमा परिणत भएको । नत्र, प्रकृतिले त बिहानैदेखि संकेत गरिसकेको थियो ।
‘फागुनको अन्तिममा भनेको चैते हुरी लाग्ने समय नै हो । प्रत्येक वर्ष फागुन–चैतमा मौसम बिग्रन्छ नै । त्यो दिन पनि बिहानैबाट आकाशमा बादल देखिएको थियो । पानी पर्न सक्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । तर त्यही सामान्य हावाहुरी र पानीले यति ठूलो बर्बादी गर्ला भनेर चाहिँ कसैले पनि सोचेका थिएनन् । त्यस्तो सोचेको भए मानिसहरू हतारिएर भाग्नुपर्ने थिएन । आखिर हतारिएर भाग्नेहरू नै त्यो दुर्घटनाको सिकार भए,’ भिआइपी प्यारापिटमा बसेर खेल हेरेका तत्कालीन मूलपानी गाविस निवासी दीपक फुयाल सम्झन्छन् ।
घटनापछि घाइतेको उद्दारको क्रममा देखिएका दृश्यले अहिलेसम्म पनि कहिलेकाँही झस्काउने गरेको फुयाल बताउँछन् । उनका अनुसार खेल सुरु भएको केहीबेरपछि हुरीबतास र सामान्य पानीसँगै ठूल्ठुला असिना बर्सिन थालेको थियो ।
फाइनल हेर्न पुगेका राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी विराटजंग शाही घटना स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘खेल चलिरहँदा आर्मी हेडक्वाटरतिरबाट एक्कासि कालो मुस्लो आयो, त्यसपछि हुरीबतास चल्यो । साधारण प्यारापिटबाट हामी केही साथी भिआइपीतिर गयौं । त्यही भएर हामी जोगियौं । घटनापछि बाँचेका हामी युवाहरूले त्रिपुरेश्वरमा रात्रिबस रोकेर यात्रु ओराल्दै घाइतेलाई वीर अस्पताल पठाएका थियौं ।’
‘भुमरी परेर आएको हुरीले धुलो उडाएर मानिसलाई आँखा हेर्न नसक्ने पारेको थियो । त्यसमाथि ठूला ठूला असिनाले चुट्दा त कसैले पनि त्यहाँ बसे ज्यान जोगिन्छ, भाग्न खोजे जे पनि हुनसक्छ भन्ने सोच्न भ्याएनन्,’ फुयाल गम्भीर भए, ‘एउटै ढोका खुला थियो । त्यो पनि एक पटकमा मुस्किलले एकजना निस्कन सक्ने थियो । तर एकैचोटि हुल आउँदा च्यापिएर धेरै लडे । अल्झिएर लडे । लडेकालाई उठाउने भन्दा पनि आफूचाहिँ नाघेर भए पनि भाग्ने सोच मानिसमा देखियो । त्यसले गर्दा उनीहरू पनि त्यहीं लडे । यसरी मानिसको चाङ लाग्यो, थिच्चिएरै धेरैको ज्यान गएको हो । आधा घण्टापछि हुरीबतास र असिना रोकिएसँगै हामीले लासको बीचबाट घाइतेलाई निकालेर अस्पताल पठाएका हौं ।’
दुर्घटना भएको आइतबार ३४ वर्ष पुगिरहँदा शाही त्यो सम्झिएर भावुक हुन्छन्, ‘मान्छेहरू मरिरहेका छन्, यहाँ नआउनु भनेपछि आफू बसेकै ठाउँमा धैर्य गरेर बाँच्नेहरू थुप्रै थिए । म पनि तिनैमध्ये एक हुँ । त्योबेला अहिलेजस्तो मोबाइलको जमाना थिएन । घरमा नपुगेसम्म परिवारसँग सम्पर्क हुँदैनथ्यो । रंगशालामा भएको दुर्घटनाको खबर मभन्दा पहिला पुगिसकेको थियो । त्यसैले घरमा पुग्दा त म मर्यो भनेर खोज्न जान लागेका रहेछन् ।’
घटनामा धेरैको ज्यान गएपछि आक्रोशित दर्शकले समयमा ढोका नखोलेको भन्दै आन्दोलन गरे । त्यसक्रममा रंगशाला बाहिर राखिएका तीनवटा कार तोडफोड भए । हुन पनि त्यो घटना व्यवस्थापनकै कमजोरीका कारण भएको थियो ।
‘हावाहुरी र असिना रोक्न नसके पनि समयमै सबै ढोका खोल्ने प्रवन्ध गरेको भए, २० हजार दर्शक ओहोरदोहोर गर्ने मूल ढोकाअगाडिको खाल्डा पुरेको भए यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने थिएन,’ विश्लेषक मिश्र भन्छन्, ‘त्यो बेलाको अवस्था हेरिकन अहिले हाम्रो रंगशाला विभिन्न चरणमा भएका पुनर्निर्माणपछि धेरै सुरक्षित भएको छ । तर अझै पनि दर्शकको सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।’
व्यवस्थापन टिकट काटेर दर्शक छिराउनेमा मात्र केन्द्रित थियो । भित्र छिरिसकेका दर्शकलाई कुनै विपत्ति परे कसरी सुरक्षित निकाल्ने भन्ने व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा थिएन । पूरा रंगशाला काँडेतारले घेरिएको थियो । दर्शक निस्कनका लागि एउटा ढोकाबाहेक विकल्प थिएन । त्यही ढोकाको पनि मुखैमा बाहिरपट्टि खाल्डो थियो । पानी परेको बेला ढोकाबाट निस्कनेबित्तिकै मानिस त्यहीँ चिप्लिएर खाल्डोमा लड्थ्यो र एकमाथि अर्को गरेर चाङ लाग्थ्यो ।
त्यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पाँच दिनपछि राखेप अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापालगायतको कार्यसमितिले पनि नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएको थियो ।
अहिले पनि रंगशाला पुग्दा मन खल्लो हुन्छ
यस्ता छन् विश्व फुटबलका दु:खद घटना
राई एएफसी एलिट महिला रेफ्री र सहायक रेफ्री प्यानल २०२२ मा समावेश
इन्टरको नजरमा डिबाला
‘ट्रयु जेन्टलम्यान’ नरेन दाइ
उनी नेपाली फुटबलका ‘ट्रयु जेन्टलम्यान’ हुन् । अचेल उनको जीवन आफैंमा खुबै ‘सादगी’ छाएको छ । यस्तोमा झन पो खरो ‘जेन्टलम्यान’ भएका छन् । नत्र उनी खुबै रम...
कोपिलाको भलिबल कर्म
प्रत्येक महिलामा जस्तो कोपिलामा पनि रातो साडीमा सजिएर परिवारसँग हिँड्न मन लाग्थ्यो । अहिले पनि लाग्छ । तर, भलिबलकै कारण व्यक्तिगत जीवनको रेल छुटिसके ज...
डेब्युमै चम्किएकी किशोरी क्रिकेटर
यस्तो अवसर पाउने खेलाडी एकाध मात्र हुन्छन् । असाध्यै विरलैमात्र त्यस्ता खेलाडी भेट्न सकिन्छ, जसले उमेर समूहमा प्रतिस्पर्धा नै नगरी सिनियर राष्ट्रिय टो...
भलिबलबाट टाढिइन् झरना
२०७४ सालदेखि झरनाले न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबबाट भलिबल खेल्दै आएकी थिइन् । तर, अब भने वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिदै गर्दा उनले भलिबल कोर्टसँगको नाता भने...
‘देशका लागि खेल्ने’ सनिशको सपना
गत वर्षको वैशाखमै भएको पहिलो संस्करणमा एपिएफका युवा रक्षक सनिश श्रेष्ठको नाम पनि थिएन । यसपालि ‘ए’ श्रेणीमा परेका उनी उच्चतम मूल्य ३ लाख ५० हजार रुपैय...
टेनिस असार १३, २०७९ १९:०६
टेनिस असार १३, २०७९ १८:४४
फुटबल असार १३, २०७९ १८:०६
क्रिकेट असार १३, २०७९ १७:५३
क्रिकेट असार १३, २०७९ १७:३३
फुटबल असार १३, २०७९ १६:२६
क्रिकेट असार १३, २०७९ १४:४८
फुटबल असार १३, २०७९ १४:२७
फुटबल असार १३, २०७९ १२:५६
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली फर्कियो
क्रिकेट असार १३, २०७९ ११:५५
काउन्टर अट्याक: के होला अल्मुताइरीको भविष्य ?
असार ४, २०७९ ००:००
सात वर्षमा मैले सबैभन्दा बढी कल्पेको मानिस हो ललित
जेठ २९, २०७९ ००:००
ललित दाइ, ढल्केको पोस्ट र सागरको गोल
ललितजीको अभाव सधैं खट्किरहेछ
फुटबलले असल अभिभावक गुमाएको यो ७ वर्ष
फुटबलले सधैं खोजिरहने छ ‘ललित दाइ’
मनीषको पुनर्जीवन, दुई क्यामरुनीको साहस
नेपाली फुटबललाई शोक, दुर्घटनामा परेको जहाज उडाउने पाइलट संकटाका फुटबल खेलाडी थिए
फिफाको नियम मिचेर खेल भइरहँदा दशरथ रंगशालामाथि ‘ड्रोन’
गोलकिपर एन्जिला पिपल्स च्वाइसको मनोनयनमा